होस गर्नुहोस्, कतै तपाईको पासवोर्ड यस्तो त छैन !::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
होस गर्नुहोस्, कतै तपाईको पासवोर्ड यस्तो त छैन !
मिडिया डबली संवाददाता प्रकाशित : शुक्रबार, फाल्गुन २५, २०७४
एजेन्सी – इन्टरनेटमा बढ्दो ह्याकिङका कारण सबैले विचार पुर्‍याएरमात्र पासवर्ड हाल्ने गर्छन् ।
सुरक्षा चुनौती र गोपनियता भंग हुने डरले शक्तिशाली पासवर्ड हाल्ने चलन छ । तर एक शोधका अनुसार मानिसहरुले एकैप्रकारका पासवर्ड राख्ने गरेका छन् ।
सन् २०१६ मा सबैभन्दा बढी पासवर्ड छ वटा अंक रहेको शोधमा उल्लेख छ । रिपोर्टका अनुसार अधिकांश मानिसले १२३४५६ नै पासवर्डको रुपमा राख्ने गरेका छन् । जुन ६ क्यारेक्टरभन्दा नि कम हुन्छ । जसलाई इन्टरनेटमा कमजोर पासवर्डको रुपमा लिइन्छ । यस्ता पासवर्डहरु ह्याक गर्न सजिलो हुनेगरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
शोधकर्ताहरुले एक करोडभन्दा बढी सेक्युरिटी कोड्स समीक्षा गर्दा यस्तो तथ्य फेला परेको हो । १२३४५६७८९ वा qwerty किहरु सजिलै टाइप हुने भएकाले मानिसहरु यस्ता पासवर्ड राख्ने गर्छन् । तर सजिलै टाइप हुने यस्ता किहरु सुरक्षाको दृष्टिकोणमा सबैभन्दा कमजोर पासवर्ड हुने गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
समीक्षामा भेटिएका अधिकांश पासवर्ड अंकमा रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । जुन १२३४५६७८, ११११११, १२३४५६७८९०, १२३४५६७, पासवर्ड, १२३१२३, ९८७६५४३२१ जस्ता थिए ।
अमेरिकाको पासवर्ड म्यानजमेन्ट कम्पनीका अनुसार १७ प्रतिशत मानिसले १२३४५६ पासवर्ड राख्ने गर्छन् । त्यसैले अपरेटर्सले आफ्ना प्रयोगकर्ताका लागि शक्तिशाली पासवर्ड राख्ने जिम्मेवारी पनि निर्वाह गर्नुपर्ने विज्ञहरुको भनाइ छ । जबमात्र इन्टरनेटमा बढ्दो अपराधलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
कम्युनिस्ट सरकारले यसरी गर्दैछ इन्टरनेटमा कडाइ, फेसबुकलाई के गर्दैछ ?
प्रभु ग्रुपको ‘प्रभु पे’को सुरुवात, यसरी कमाउनुस् फ्री मा पैसा
टेलिकमको निर्णयले उपभोक्ताहरू यसरी हुनेछन् मालामाल, मूल्य पनि नबढ्ने
प्रभु समूहको प्रभु टि.भि. नेपालमा, मोबाइलदेखि ल्यापटपसम्म
नेपाल टेलिकमले ल्यायो अत्यन्तै सस्तोमा नयाँ सेवा, हुनेछ यस्तो फाइदा !
यूट्यूवमाथि लाग्यो प्रतिबन्ध